Bhalisela iNcwadana yeTekhnoloji ePhakamileyo yokuThengisa kwiShishini! | Martech Zone
Bhalisela iNcwadana yeTekhnoloji ePhakamileyo yokuThengisa kwiShishini!
zeSITA jetpack, ngoku sinokhetho oluqinileyo lwencwadana yeendaba kaMartech.
I-imeyile yethu iphendula kwizixhobo eziphathwayo kwaye kulula ukuskrola kuyo ukuchonga izihloko ekufuneka ishishini lakho liphumelele. Uya kufumana zonke izithuba ezihlaziyiweyo kunye nemisitho yamva nje esiyikhuthazayo kwisiza. Kwaye ngamaxesha athile siya kubandakanya izibonelelo ezikhethekileyo zababhalisi kuphela!
Ii-imeyile zithunyelwa Kwangoko. Iileta zeendaba zeveki nganye ziphuma rhoqo ngoMvulo ukuze uqalise iveki yakho ngeembono ezintsha!
Ngaphezulu kwe32,000 ukuthengisa kunye neengcali zentengiso qhubeka netekhnoloji enkosi kwincwadana yethu!
Bhalisa ngoku kwaye uqalise ukufumanisa, ukuphanda, nokufunda indlela yokubeka eyona teknoloji yokuthengisa intengiso ukuze usebenze ukukhulisa ishishini lakho!
Nantsi into ababhalisile ngayo malunga nale ncwadana:
Kuzo zonke ii-imeyile endizifumanayo, Martech ZoneIncwadana yeendaba yile bendiyifunda rhoqo kusasa. UDouglas wabelana ngomxholo omangalisayo oye wandinceda ukukhulisa amashishini am kule minyaka idlulileyo - ukusuka ekufumaneni izixhobo zokuqonda indlela yokuphumeza itekhnoloji yezona ziphumo zibalaseleyo zokuthengisa, le ncwadana ngumgodi wegolide!
UAdam Omncinci, Isosi seAgent